Fanlyplas-Ka go'an filimka caagga ah iyo xalka xarriiqda xaashida
Fanlyplas! Mustaqbalkaaga halaag！
Iyada oo tobanaan sano ah asalka waxsoosaarka, Fanlyplas haynta horumarinta dhammaadka-sare, isticmaalka tamarta hooseysa, wax-soo-saarka sare, filimka caagga ah ee wax-soo-saarka deggan, xaashida iyo khadka fidinta astaanta.
Ku soo dhowow adduunka ee FANLYPLAS technology extrusion!
Fanlyplas-Ka go’an filim caag ah iyo xalka xarriiqda xaashida.
Iyada oo sannado la horumarinayo oo si joogto ah loo hagaajinayo adeegga AZ. Fanlyplas wuxuu awood u leeyahay inuu ku siiyo xirmooyin dhammaystiran oo ku jira xaashida Caagga ah, khadka fidinta astaanta astaanta.
Fanlyplas, oo ku yaala Shanghai, Shiinaha. wuxuu noqonayaa mid firfircoon suuqyada adduunka oo dhan in ka badan 10 dal.
Warshadda saldhigga wax -soo -saarka ee shirkaddeennu waxay dabooshaa aag dhan 6,000 oo mitir oo laba jibbaaran.
Qiimaha wax soo saarka
Waxaan ku takhasusnay soo saaridda khadadka wax soo saarka mashiinnada caagga ah, oo leh qiime wax soo saar sanadle ah 5 milyan oo doolarka Mareykanka ah.
In ka badan 16 dal oo adduunka ah ayaa isticmaalay alaabtayada waxayna heleen adeegyadayada.
Tan iyo markii la aasaasay 16 sano ka hor, shirkadda ku jirta xaashida iyo khadka fidinta filimka gaar ahaan alaabada xumbo.
PVC Khadka fidinta Edge Banding
PVC Khadka Extrusion Panel Panel
PP/PE WPC dejinta Extrusion line
PVC WPC Khadka Fidinta Albaabka Albaabka
PVC line extrusion sheet xumbo lacag la'aan ah
PVC/WPC Khadka Xadhkaha ee Xumbada Guddiga
SPC line extrusion xaashida dhulka
PVC line extrusion sheet marmar ah
Fanlyplas-Xulashada Xalka Bixinta Balaastikada Si aad u hesho waxqabadka ugu fiican iyo natiijooyinka.
Mashiinkayagu wuxuu soo saari karaa xaashida caagga ah, filimka iyo astaamaha kaas oo lagu dabaqay aagga qurxinta gudaha iyo dibaddaba, warshadaha maaddada dhismaha, warshadaha maaddada calaamadaysan, warshadaha walxaha baakadaha, warshadaha kiimikada iyo alaabooyinka indhaha ee dhammaadka ah, miisaanka hooseeya iyo alaabada xoogga sare leh.
Sahaminta Maxaa Fanlyplas U bandhigidda
Ka caawi macaamiisha qiimeynta suuragalnimada mashruuca, xulashada goobta, miisaanka, naqshadda dhirta, iwm.
Sida laga soo xigtay mashruuca, ka caawi macaamiisha inay soo saaraan qalab tayo sare leh ilaa rakibidda iyo aqbalaadda
Ka caawi macaamiisha samaynta qorshayaasha iyo sawirrada ka soo baxa ujeedooyinkooda iyo qorshayaashooda.
Sii tababarka qalliinka mashiinka, dayactirka, xallinta dhibaatooyinka, iwm ee shaqaalaha macmiilka.
Xaqiiji qorshaha kama dambaysta ah iyo faahfaahinta iyadoo loo eegayo xaaladda macmiilka
Sii macaamiisha adeeg tayo sare leh, degdeg ah, iyo shaqsiyeedba ah.
Faa'iidooyinka ugu Wanaagsan ee macaamiisheena
Tirtir shuruudaha macaamiisha si aad uga caawiso macaamiisha inay qorsheeyaan qorshaynta warshadda iyo qorshaha qaabaynta ugu habboon.
Marka loo eego shuruudaha wax soo saarka ee macaamilka, waxaan siin doonaa macaamiisha qorshaha qaabeynta ugu fiican.
Sii macaamiisha adeegyo xirfadeed ee agabka wax soo saarka iyo qaacidooyinka
Blogkii ugu dambeeyay & Maqaallo
PE/PP Dibadda WPC Makiinadaha/Qalabka/Khadka Wax -soo -saaridda
Table of Contents WPC Hordhaca alaabta Faa'iidooyinka WPC Rajada Suuqa Agabka ee WPC Codsiga WPC Qalabka Dibedda WPC Habsocodsiinta Wax -soo -saarka Khadka Shuruudaha Shuruudaha Hawlgelinta Rakibaadda iyo Hawlgelinta
Sii Akhri +
Falanqaynta iyo Ka -hortagga Tallaabooyinka Caadiga ah ee Sababa Unugga Jebiyay PVC Guddiga xumbo maqaarka
Qaybta isgoyska ee xaashida caagga ah ee la xumeeyey ayaa jabtay ama gashay unugyo. Aragti ahaan, waxay leedahay laba arrimood oo waaweyn: Kow, maxaa yeelay xoogga maxalliga ah ee dhalaalid laftiisa ayaa aad u badan
Mabda'a iyo Codsiga adag PVC Caaga Xumbo
Caagadda xumbo waa nooc ka mid ah maaddada polymer -ka oo ay samaysay tiro badan oo makarafoonno gaas oo ku kala firdhay caag adag, waxayna leedahay astaamaha miisaanka fudud, dahaarka kulaylka, dhawaaqa
Lix Dareenka Guud PVC Habaynta Guddiga Xumbo
Astaamaha habaynta PVC loox xumbo ayaa qiyaas ahaan la mid ah kan ka shaqaynta qoryaha. Waxa kaliya oo lagama maarmaan ah in laga fogaado gubasho ay sababtay heerkulka shaqada oo aad u sarreeya. Gudaha
Hel xalalka fidinta ama adeegga maanta
Waxaan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno! Noo soo dir farriin adiga oo adeegsanaya foomka ka soo horjeeda, ama email noogu soo dir. Waxaan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno! Noo soo dir fariin adiga oo adeegsanaya foomka hoose.
Khadka Bixinta Profile
Filim, Khadka fidinta xaashida
： Maya. 28, Wadada Moyu, Degmada Jiading, Shanghai, Shiinaha
FANLYPLAS waa Astaanta Ganacsiga ee FANLYPLAS SHANGHAI CO., LTD
Isku-hagaajinta xawaaraha bogga otomaatigga ah ee waxqabadka goobta degdegga ah